Australia, Canada, New Zealand, UK, USA dia manontany an'i Shina: Atsaharo ny politika Hong Kong!
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Australia, Canada, New Zealand, UK, USA dia manontany an'i Shina: Atsaharo ny politika Hong Kong!
Nanjary ahiahy iraisam-pirenena i Hong Kong, ary tsy momba ny COVID-19 izany. Ny lahatsoratr'ity fanambarana manaraka ity izay natolotra tamin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia navoakan'ny Governemanta amerikanina amerikanina, aostralia, kanada, new zélande, ary ny Fanjakana anglisy.
Izahay, ny minisitry ny raharaham-bahiny any Aostralia, Canada, New Zealand, ary ny United Kingdom, ary ny sekreteram-panjakana amerikanina, dia nanamafy ny ahiahinay mafy momba ny fametrahan'i Shina lalàna vaovao hamongorana ny mpanao lalàna voafidy ao Hong Kong. Taorian'ny fametrahana ny lalàna momba ny fiarovam-pirenena sy ny fanemorana ny fifidianana ny filankevitry ny mpanao lalàna tamin'ny volana septambra, ity fanapahan-kevitra ity dia manimba hatrany ny fahalalahana mahaleo tena sy ny zon'olombelona ary ny fahalalahana.
Ny hetsika ataon'i Shina dia fanitsakitsahana mazava ny adidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, eo ambanin'ny Fanambarana iraisana voatondron'ny Firenena Mikambana. Manitsakitsaka ny fanoloran-tenan'i Sina fa hankafy ny 'fizakan-tena ambony' i Hong Kong, sy ny zon'ny fahalalahana miteny.
Ny lalàna momba ny fanilihana dia toa ampahany amin'ny fampielezan-kevitra mihintsy mba hampanginana ny feo manakiana rehetra taorian'ny fanemorana ny fifidianana ny Filankevitry ny mpanao lalàna tamin'ny volana septambra, ny fametrahana fiampangana an'ireo mpanao lalàna voafidy maromaro, ary ny hetsika manimba ny fahalalahan'ny media any Hong Kong.
Miantso an'i Shina izahay mba hitsahatra amin'ny fanakorontanana ny zon'ny mponin'i Hong Kong hifidy ny solontenany mifanaraka amin'ny Fanambarana iraisana sy ny lalàna fototra. Mba hisian'ny fitoniana sy fanambinana ao Hong Kong, zava-dehibe ny hanajan'i Shina sy ny manampahefana Hong Kong ny fantsona mba hanehoan'ny mponina ao Hong Kong ny ahiahiny sy ny heviny ara-dalàna.
Amin'ny maha-mpikambana lehibe amin'ny vondrona iraisam-pirenena antsika dia manantena izahay fa hanaja ny adidiny iraisam-pirenena sy ny adidiny amin'ny mponin'i Hong Kong i Shina. Miangavy ny tompon'andraikitra foibe sinoa izahay mba handinika indray ny fihetsik'izy ireo manoloana ny mpanao lalàna voafidy ao Hong Kong ary hamerina avy hatrany ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra mpanao lalàna.
Indostrian'ny fitsangatsanganana India: Tsy misy fanamaivanana, tsy misy fanentanana
COVID-19 sy Italia: Inona no tokony natao